Etu Symbiosis nke Omenala na Ahịa Digital Na-agbanwe Agbanwe Otu Anyị Si Zụta Ihe | Martech Zone
Etu Symbiosis nke Omenala na Oru ahia Digital Na-agbanwe Agbanwe Otu Anyị Si Azu Ihe
Sọnde, Febụwarị 28, 2021 Sọnde, Febụwarị 28, 2021 Diogo Voz
Industrylọ ọrụ ịzụ ahịa nwere njikọ miri emi na akparamàgwà mmadụ, omume, na mmekọrịta nke na-egosi ịgbaso mgbanwe mgbanwe dijitalụ anyị megoro n'ime afọ iri abụọ na ise gara aga. Iji mee ka anyị sonye na ya, otu dị iche iche azaghachila na mgbanwe a site na ịme atụmatụ nkwukọrịta mgbasa ozi dijitalụ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ azụmaahịa azụmaahịa ha, mana ọ dịghị ka agbahapụla ọwa ọdịnala.
Ndị ahịa na-ere ahịa dị ka bọọdụ mkpọsa, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ, igwe onyonyo, redio, ma ọ bụ mpempe akwụkwọ n'akụkụ digital marketing na mgbasa ozi mgbasa ozi na-arụ ọrụ aka na aka na-enye aka ka mma ịmara mmata, ihe ọ pụtara, iguzosi ike n'ihe, na n'ikpeazụ iji metụta ndị na-azụ ahịa na ọkwa ọ bụla nke usoro mkpebi ha.
Kedu ka o si agbanwe ụzọ anyị si azụ ihe? Ka anyị gabiga ya ugbu a.
Taa, akụkụ buru ibu nke ndụ anyị na-eme na mpaghara dijitalụ. Nọmba ndị doro anya:
N'ụbọchị ikpeazụ nke 2020, e nwere Ndị ọrụ ịntanetị nde 4.9 na nde ijeri anọ na nde abụọ na-arụ ọrụ na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta gburugburu ụwa.
Ntuziaka mbu nke saịtị
Dị ka ahịa dị n'ịntanetị mepụtara, otú ahụ ka atụmatụ ịzụ ahịa ụlọ ọrụ si dị. Mgbanwe mgbanwe dijitalụ mere ka o kwe omume maka ụdị iji soro ndị ahịa na-eme ngwa ngwa, yana maka ịmekọrịta iji tụnyere ngwaahịa na ọnụahịa, chọọ ndụmọdụ, soro ndị na-eche echiche, na ịzụta ihe.
Wezọ anyị si azụ na-ebo ebubo na ị na-ejikarị ịntanetị na njiri nke ngwaọrụ ejidere, dị ka mmekọrịta mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe, ịme mkpebi, na ịzụ ahịa dị mfe karịa ka ọ dị na mbụ.
Ahịa Ọhụrụ, Ahịa Ọhụrụ?
Ee, mana ka anyị doo anya.
Ebumnuche ahia zuru oke, ọdịnala na dijitalụ, na-atụ aro ịmata mkpa nke obodo, ịmepụta onyinye pụrụ iche iji kwado mkpa ndị ahụ, ma soro ndị otu ha na-ekwurịta okwu nke ọma iji nwekwuo afọ ojuju. Agbanyeghị na ọnụnọ nke ndị obodo dị na ntanetị agaghị ekwe omume ịgọnahụ, dijitalụ abụghị ahịa niile na njedebe.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, nara Pepsi ume oru ngo dị ka ihe atụ. Na 2010, Pepsi-Cola kpebiri ịhapụ mgbasa ozi mgbasa ozi (ntụgharị mgbasa ozi telivishọn kwa afọ nke Super Bowl) iji malite mkpọsa dijitalụ buru ibu, na-anwa ịmatakwu ma zụlite mmekọrịta dị ogologo oge na ndị na-azụ ahịa. Pepsi kwupụtara na ha ga-enye $ 20 maka onyinye nye ndị otu na ndị nwere echiche iji mee ka ụwa bụrụ ebe ka mma, na-ahọpụta ihe kacha mma maka ịtụ vootu ọha.
N'ihe banyere itinye aka, ebumnuche ha bụ ihe a kụrụ akpụ! Ihe karịrị nde 80 debara aha, Ibe Pepsi na Facebook nwetara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 3.5 amasị, na Akaụntụ Pepsi na Twitter nabatara ihe karịrị ndị na-eso 60,000, mana ị nwere ike ịkọ nkọ ihe mere ndị ahịa ahụ?
Branddị a furu efu ihe ruru ọkara ijeri dollar na ego ha nwetara, si na ọdịnala ọdịnala ya dị ka ọnụọgụ abụọ dị nro na America na nke atọ, n'azụ Diet Coke.
N'okwu a, naanị mgbasa ozi ọha na eze mere ka Pepsi nwee ike ijikọ ndị ahịa, melite mmata, imetụta ndị na-ere ahịa, nata nzaghachi, mana ọ mụghị ahịa nke mere ka ụlọ ọrụ ahụ nakweere, ọzọ, usoro ọnụọgụ ọtụtụ nke gụnyere ọdịnala usoro ahia. Gịnị kpatara nke ahụ?
Dijitalụ na Omenala Aka na Aka
Omenala mgbasa ozi adịghị agbaji. Ihe kwesiri idozi ya bụ mgbanwe ntụgharị uche nke ọrụ mgbasa ozi ọdịnala jiri bụrụ na ihe ọrụ ya taa.
Charlie DeNatale, N'elu Fold's Traditional Media Strategist
Echere m na nke a enweghị ike ịbụ eziokwu karịa, ma ọ bụghị, gịnị kpatara anyị ga-eji hụ McDonald n'èzí?
Ọ bụ ezie na anyị na-akpọ ya ọdịnala, ahịa dị iche iche gbanwere n'ụzọ doro anya kemgbe oge ọla edo nke redio na akwụkwọ akụkọ, na-ewere ugbu a ọrụ dị oke iche. Ọ na - enyere aka ịchụ ndị otu ezinụlọ dị iche iche, iji nweta ndị na-ege ntị niche site na magazin pụrụ iche, mmemme tv, na akwụkwọ akụkọ, na-enye aka n'ịmepụta mmetụta nke ike, ntụkwasị obi, na mmata maka ụdị ahụ, yana iwulite ọnọdụ dị mma gburugburu ya nke ọma.
Dika dijitalụ gosiputara na odi nkpa maka uzo iji kwe ka ahia na-agbanwe agbanwe, omenala nwere ike ibu agha iji luso ndi mmadu ume ka ha belata oge, na-eme ka ndi mmadu nwekwuo onwe ha, dika akwukwo ndi ozo bu ihe omuma. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ịchọ onye na-eme mgbanwe iji chọpụta ihe ha zụrụ, ndị ọzọ nwere ike ịkọwapụta na ịtụkwasị obi na isiokwu akwụkwọ akụkọ.
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ntanetị, ndị ahịa dijitalụ na ndị ahịa ọdịnala na-agbakọta n'akụkụ abụọ nke ụdị ndị ahịa, na-abịakwute ndị ahịa nwere ike iduga azụmahịa ndị yiri ya na nke onwe ha maka ịbawanye ego. Ringgagharị onye na ndị ọzọ na-enwekwu ohere nke na-edebe ndị na-ege ntị n'ime ika si “afụ nke mmetụta” na n'ụzọ dị irè metụtara ọkụkụ na mkpebi njem.
Ọnụnọ dijitalụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana ngwa ọrụ mkpanaka na-akpụzi ụzọ anyị si azụta, na-akwalite mmadụ na ịzụ ahịa n'ịntanetị, mana azịza nke mgbanwe ahụ bụ usoro ịzụ ahịa ọtụtụ ọwa, gụnyere ndị na-ajụ ọdịnala nke na-emetụta usoro nnweta ahụ dum. Na-ekwurịta okwu site na ọwa dị iche iche, ụlọ ọrụ na-emesi obi ike na mgbapụ afụ mmetụta nke ahụ nwere ike ịmepụta mmetụta na ọkwa ọ bụla nke njem ndị na-eri ya site na edemede nke ọchịchọ na ịzụta ego.
Tags: n'elu ogige atụrụCharlie jụrụdigital marketingpepsipepsi ume ọhụrụ oru ngoSocial Media MarketingOmenala ahia
Diogo bụ onye na-ere ahịa dijitalụ na-enweghị onwe ya na-ahụ n'anya ịzụ ahịa ihe ọmụma na ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọtaghị ya ka ọ na-agụ maka ụdị azụmaahịa ọhụụ, ị ga - ahụta ya ka ọ na - ege ntị pọdkastị ma ọ bụ na - arụ ọrụ na imepụta ngwa ọrụ ya.
Kedu ka Digital Marketing si azụ nri ahịa gị
Etu m si chọọ ihe ngosi m gosipụtara maka Social Media na Socialbawanye Social Traffic site na 30.9%